बाँके कांग्रेसका ढुकढुकी वीरन्द्र शाहकाे भनाइ, संगठनमा अनुशासन उच्च प्राथमिकतामा.. - Nepal Post Daily
बाँके कांग्रेसका ढुकढुकी वीरन्द्र शाहकाे भनाइ, संगठनमा अनुशासन उच्च प्राथमिकतामा..
संगठन पार्टीको विधान र कार्यकर्ताको भावना अनुसार चल्नुपर्छ : वीरेन्द्रबहादुर शाह
By नकुल खत्री
Nakul khatri Correspondent from Nepalgunj.
बाँके, ०८ मंसिर । नेपाली कांग्रेस बाँकेका जिल्ला सदस्य एवं नेपाल तरुण दलका बाँके जिल्लाका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेस बाँके क्षेत्र नं. २ को क्षेत्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । राजनीतिमा विशेष रुचि भएका शाह संगठन बिस्तार र नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मनपराउने नेता हुन् । उनी २०४२ सालमा नेपालगंजको मंगलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न भारतको लखनउ गए । लखनउस्थित जयनारायण इन्टर कलेजबाट आइएस्सी उत्तीर्ण गरे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा काठमाडौंमा सक्रिय रहेसँगै उनी राजनीतिमा लागे । नेपालगंजको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट इतिहास र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । २५ चैत २०२६ मा जन्मिएका उनी करिब २ दशकदेखि नेपाली कांग्रेसका विभिन्न संगठनमा सक्रिय छन् । निरन्तर बाँके तरुण दलको संगठन र नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेका छन् उनले । उनी भारतको लखनऊबाट आइएस्सीको अध्ययन सकेर घर फर्किएका थिएँ ।
त्यति नै बेला थप अध्ययनका लागि उनी काठमाडौं पुगेँ । वि.सं २०४६ सालमा त्यतिखेर नै आन्दोलन चर्किएको थियो । उनको राजनीतिको सुरुवात त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थी आन्दोलनबाट नै भएको हो ।
त्यसयता उनले अन्तर्राष्ट्रिय ’सोसलिष्ट’ आन्दोलनका दस्तावेज अनि नेपालमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट बुझ्न थालेका हुन् । विधि र प्रक्रियाबाट पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । पार्टी विभाजन हुँदा पनि यिनी शेरबहादुर देउवाकै लाइनमा थिएँ र निरन्तर अहिलेसम्म पनि छन् । संगठन पार्टीको विधान र कार्यकर्ताको भावना अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने नै उनको आधिकारिक लाइन हो ।
क्षेत्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका उनले पार्टीका विभिन्न पदमा बसेकाहरूदेखि सक्रिय सदस्यहरूलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । कार्यकारी पद र सेरेमोनियल पदमा भएकाहरूलाई पार्टीको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार गतिशील बनाउन व्यावहारिक रूपमा सबल बनाउने उनको ध्येय उनले प्रष्ट पारे । यसका अलावा संगठनमा अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताए ।
Previous articleप्रधानान्यायाधीश विरुद्ध बीरगन्जमा बारले गर्यो विरोध !
Next articleमहिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छः राष्ट्रपति